ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကန် (TÜDEMSAŞ) ၏ဆောက်လုပ်ရေး - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeအထွေထွေရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်ဆောက်လုပ်ရေး (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်ဆောက်လုပ်ရေး (TÜDEMSAŞ)
23 / 03 / 2015 Levent Ozen ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန် 0
စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်ဆောက်လုပ်ရေး
တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC (TÜDEMSAŞ)
စွန့်ပစ်ထုံးရွှံ့နွံအတိုင်ကီတည်ဆောက်နေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 29812
က) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 SÝVASဗဟို / SİVAS
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 / 4699 - 3462235051
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ihale@tudemsas.gov.t
စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များက specification များနှင့် 21 ကလောင်စွန့်ပစ် Lime ရွှံ့နွံရေကူးကန်ဓာတ်ပုံ
ခ) Place: ညွှန်ကြားမှု-အထွေထွေTÜDEMSAŞSÝVAS
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (ခြောက်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 60: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
က) Place: ညွှန်ကြားမှု-အထွေထွေTÜDEMSAŞSÝVAS
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 26.03.2015 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက် (TÜDEMSAŞ) ဝယ်ယူရမည် 26 / 10 / 2015 တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက်တူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 143715 ယောဘကိုခေါင်းစဉ်: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ် Lime စာနယ်ဇင်းစက်တင်ဒါအမျိုးအစား Filter - လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: ကုန်စည်များ၏ဝယ်ယူ - ပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 1 - ထိုအုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: KADI BURHANETTİN mAh ။ 58059 ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462251818 - 3462235051 ဂ) အီလက်ထရောနစ်မေးလ်လိပ်စာ: ihale@tudemsas.gov.t သုံး) နူးညံ့ / prequalification စာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: www.tudemsas.gov.t2ဖြစ်ပါသည် - တင်ဒါဘာသာရပ်ကုန်ပစ္စည်းများ) သဘာဝတရား အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ဂိုဒေါင်နှင့် Loko ၏ Samsun ညွှန်ကြားမှုကိုလယ်ကွန်ကရစ်န်းကျင်နှင့်လောင်စာဆီ Tank လျှံရေကူးကန်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး 26 / 11 / 2012 စီးပွားရေး TCDD4ပြုလုပ်ခြင်းဂိုဒေါင်နှင့်လယ်ပြင်ကွန်ကရစ်န်းကျင် Samsun Loko ၏ကို Maintenance ညွှန်ကြားမှုနှင့်လောင်စာဆီ Tank လျှံရေကူးကန်။ အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 သည်နှင့်အညီတစ်ဦးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ Making ရေကူးကန်လျှံမှတစ်ဝိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးကွန်ကရစ်၏လယ်ပြင်ပတ်လည် Samsun ဂိုဒေါင်နှင့် Loko စောင့်ရှောက်ညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါလောင်စာဆီတိုင်ကီ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 173323 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Muhsin Yazicioglu Boulevard NO:258080 ဗဟို / SİVASခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462231332 ဂ) e-mail, ...
အဆိုပါİZBANဘူတာဆွဲဆောင်မှုများဘေးတွင် full-အိုလံပစ်ရေကူးကန် 29 / 06 / 2018 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ခါးပတ်İZBANဘူတာရုံနောက်တစ်နေ့5တထောင် mxnumx'lik ဧရိယာ, "Full-အိုလံပစ်" ရေကူးကန်တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ ရေအောက်ရပ်ဂ်ဘီနဲ့ရေပိုလိုပွဲစက်ရုံများ၏အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တည်ခင်းဧည်ပါလိမ့်မည်ထားရှိလိမ့်မည် သန့်စွန့်ပစ်ရေပြန်သုံးခံရဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Mustafa Kemal Ataturk နည်းပညာနှင့်2နှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ခါးပတ်İZBANဘူတာရုံများနှင့်ဘတ်စ်ကားလွှဲပြောင်းစင်တာအသက်မွေးမှု High School တွင်တူရကီရဲ့အများဆုံးခေတ်သစ်အကြားတထောင်စတုရန်းမီတာအသက်အရွယ်၏İzmirliအကြိုးပွုနိုငျကွောငျးကိုအပြည့်အဝအိုလံပစ်အရွယ်အစားရေကူးကန်ပေးရ။ လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းစက်ရုံများ၏ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါခေါ်ယူထွက်ဖြစ်စီစဉ်ထားသည်။ လူမှုရေးဘဝကကျောင်းပရဝုဏ် Buca နှင့် Bornova Asik Veysel အပန်းဖြေဧရိယာ ...
ရွှေအသက်အရွယ်TÜVASAŞနေထိုင်စဉ်, အဘယ်ကြောင့်ရွှံ့နှင့်ဝန်ထမ်းပစ်TÜVASAŞ 14 / 08 / 2012 အဆိုပါTÜVASAŞရွှေအသက်အရွယ်ခံစားနေစဉ်, ကံမကောင်း, လူများ Sakarya အတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့စက်ရုံငါးခုဝါသနာချင်းအပြေးအလွှားပြီးနောက်ကြယ် tailed ရာမှသငျသညျTÜVASAŞ (paste ချင်ရှိရာစက်ရုံမှာအချို့သောအတိုက်အခံပါတီများလုပ်ကိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်အငြိမ်းစားယူသူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ... ဒီကြီးမားမြတ်သောအဖွဲ့အစည်းမှ mudslinging ရေးသားချက်များဖြစ်လာသည် ) ... ဤလူတထောင်တထောင်ပိုက်ဆံဆဲရေးတတ်ကြောင်းကြမ်းတမ်းကင်လုပ်ခိုင်း၏ကြင်နာမုသာမသုံးခြင်းနှင့်ရွှံ့ပါဘူး ... ရဲ "မုသာအတွက် nobility ရှိပါတယ်" တုန်လှုပ်လှုပ် ... လို့ပြောမထားဘူးမတ်တပ်ရပ်နေကြတယ် ... အဲဒီမှာဒီလူတွေ၏ထားတဲ့အတွက်အာဏာကာလခဲ့ပေမယ့်မျှအဆိုးမြင်အတွေးတွေအသံမဖူး ... အခုတော့လျှင်သို့မဟုတ်TÜVASAŞ ... လာသောအခါTÜVASAŞ တစ်စုံတစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှု၏ပမာဏအပေါ်တိုက်ခိုက်မှု၏ရှေ့မှတက်ရရှိသွားတဲ့လျှင်sözleşmişçe ...
သူတို့ကရွှံ့ကြမ်းခင်းရထားလမ်းခင်း 17 / 11 / 2012 Bandirma အညီကျင်းပလိမ့်မည်သည့်အရှိန်ရထားများ၏မူဘောင်အတွင်း Izmir - - လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် Susurluk အကြားသက်တမ်းတိုးအလုပ် Track နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်မီးရထား Tile ကြမ်းပြင် Banda-Raya သူတို့ရဲ့ရွှံ့သူတို့က။ မြို့တော်ဝန်ရဲ့ Sunullah Sener Auriga,3နှင့်အတူ Sunullah ရပ်ကွက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်မြို့ရိုးအကြားလမ်းကြောင်းအပေါ်အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းစဉ်အတွင်းသိမျး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိပေးချက်များနေသော်လည်းအကြိမ်ကြိမ်သူမီးရထားလမ်းကြောင်း၏ 1 ကီလိုမီတာ၏အကြီးအကဲရွှံ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတင်ကြ၏သူကပြောပါတယ်။ Sunullah ခရိုင်အကြီးအကဲ Sener Auriga ရဲ့အကျင့်အတွက်ကလည်း, "3 လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အလုပ်စဉ်အတွင်းလုပ်မြို့ရိုးကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြိမ်ကြိမ်စပယ်ယာဒေသသတိပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ ဒါကရထားလမ်းပေါ်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက်ရေသွန်ငါတို့၏ကိုယ်သတိပေးနေသော်လည်း ...
တူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc က
ဝက်ဘ်ဆိုက် Facebook က Instagram ကို တွစ်တာ Google+ မှာ YouTube ကို LinkedIn တို့
3 ။ တံတားများ,3။ ထိုကဲ့သို့သော Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အဖြစ်လေဆိပ်စီမံကိန်းများကိုရာသီဥတုကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်, ရေလျှော့ချပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: gantry ရိန်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အက်စီတလင်းစွန့်ပစ်ထုံး filter ကိုစာနယ်ဇင်းစက် (TÜDEMSAŞ) ဝယ်ယူရမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ဂိုဒေါင်နှင့် Loko ၏ Samsun ညွှန်ကြားမှုကိုလယ်ကွန်ကရစ်န်းကျင်နှင့်လောင်စာဆီ Tank လျှံရေကူးကန်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး
EIA ကိုအစီရင်ခံစာထုံးကျောက်ကျောက်မိုင်းများ Execution Stop မှဆုံးဖြတ်ချက်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သစ် Galvano လုပ်ငန်းခွင် (TÜLOMSAŞ) ၏ရှေးဒင်္ဂါးပြား Sheet များေူပာင်းလဲရေးကိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (406) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)